Tag: b2b ahịa | Martech Zone
Kpido: b2b ahịa
N'ịbụ ndị na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ SaaS na ndị ahịa ahịa na-apụ apụ, ọ bịara doo anya nke ọma na uto nke ụlọ ọrụ ahụ dabere na ikike anyị maka ndị nnọchi anya ahịa anyị imechi azụmaahịa ọhụrụ. Ma, ọ bụghị ihe ijuanya na enwere mmekọrịta zuru oke n'etiti olu ọkpụkpọ si ọpụpụ ahịa na ọnụ ahịa ahịa ha emechiri. Ọ bụrụ na nke ahụ na-enye gị echiche uche nke ụfọdụ ahịa na-ekwu okwu na atụmanya ọ bụla 30
Dabere na Mkpebi Sirius, 67% nke njem onye zụrụ ahịa na-eme ugbu a na ntanetị. Nke ahụ pụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke mkpebi ịzụta ka emere tupu atụmanya ọbụlagodi ịmalite mkparịta ụka bara uru na ahịa. Ọ bụrụ na ị naghị enye uru tupu mmekọrịta mbụ ahụ na rep ahụ, mgbe ahụ ị nwere ike ọ gaghị abụ onye na-azọ mmasị ịhụnanya gị. Dị ka anyị niile maara, n'ime ahịa na-eto eto maka afọ ole na ole gara aga, yana